China TS3 Ikuku Remote-achịkwa Life Buoy Manufacturer na Supplier | Topsky
Igwe ikuku na-achịkwa ikike ndụ ike buoy bụ obere robot na-azọpụta ndụ nke ga-arụ ọrụ nke ọma. Enwere ike iji ya mee ihe na nnapụta nke mmiri na-ada na ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, osimiri, osimiri, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, na idei mmiri.
A na-ahụ maka akara ntanetị site na njikwa ntanetị, na arụmọrụ ahụ dị mfe. Ebuputaghị ọsọ bụ 6m / s, nke nwere ike ịbịakwute onye dabara na mmiri maka nnapụta. Nedgba ọsọ dị mmadụ bụ 2m / s. Enwere ọkụ mgbaàmà mgba ọkụ dị elu na n'akụkụ abụọ, nke nwere ike ịchọta ọnọdụ nke ndụ na-ehi ụra n'abalị na ajọ ihu igwe. Ihu mgbochi mgbochi ihu nwere ike igbochi mmechi mmebi ahụ mmadụ n'oge usoro njem. Propela na-eji ihe nkpuchi eme ihe iji gbochie ihe ndi ala ozo ighari. Ejiri eriri igwefoto n'ihu ihu nke ndụ buoy, nke enwere ike itinye ya na igwefoto ka ịdekọ ozi nnapụta. Ndụ buoy nwere sistemụ GPS arụnyere, nke nwere ike ịmata ọnọdụ ziri ezi.
Ọ bụrụ na ihe ọghọm mmiri emee, enwere ike itinye ndụ ike, yana ọnọdụ onye dabara na mmiri nwere ike ịnọ n'ụzọ ziri ezi site na ọnọdụ GPS, nyocha vidiyo, njirimara akwụkwọ ntuziaka, wdg, yana njikwa enwere ike iji ya rute ọnọdụ onye dabara na mmiri iji malite nnapụta. Ndị dabara na mmiri ahụ na-eche nnapụta, ma ọ bụ kpọghachite ndị mmadụ na mpaghara nchekwa site na sistemu ike, nke meriri oge dị oke ọnụ maka nnapụta ma mekwa ka ọnụ ọgụgụ nlanarị nke ndị dabara na mmiri ahụ ka mma. Mgbe ọnọdụ nke mmadụ ịdaba na mmiri dị oke egwu, ike ndụ nwere ike iburu ndị nnapụta ịbịakwute onye ahụ dabara na mmiri maka nnapụta. Kinddị ngwa a na-azọpụta ike anụ ahụ dị oke ọnụ ahịa nke onye nnapụta ma na-eme ka ọrụ nzọpụta dị mma nke ukwuu. Mgbe achọrọ nnapụta na ogologo oge (na mpụga ebe a na-ahụ anya), ike ndụ nwere ike ịkwado ndị drone iji mepụta nnapụta ụzọ atọ. Akụkụ atọ a nwere ọgụgụ isi nke ọrụ nnapụta na-ejikọ ikuku na mmiri na-eme ka oke nnapụta dịkwuo mma ma mekwa ka ụzọ nzọpụta dịkwuo mma.
2. Nka na ụzụ ụdịdị
2.1 Akụkụ: 101 * 89 * 17cm
2.2 Ibu: 12Kg
2.3 Nnapụta ikike ibu: 200Kg
2.4 Oke ikuku nkwurịta okwu kachasị 1000m
2.5 Ọ dịghị-ọsọ ọsọ: 6m / s
2.6 Manned ọsọ: 2m / s
2.7 Ndụ obere batrị: 45min
2.8 Ime akara anya: 1.2Km
2.9 Oge oru 30min
3.1 A na-eme shei nke ihe LLDPE na ezigbo nguzogide mkpuchi, mkpuchi eletriki, ike na nguzogide oyi.
3.2 Nnapụta ngwa ngwa na usoro niile: ọsọ efu: 6m / s; njikwa mmadụ (80Kg): 2m / s.
3.3 gundị ụdị ụdị egbe ahụ nwere ike iji otu aka rụọ ọrụ, ọrụ ahụ dị mfe, yana ike ndụ ike nwere ike ịchịkwa ya n'ụzọ ziri ezi.
3.4 Ghọta akara ngosi di anya di anya kariri 1.2Km.
3.5 Nkwado sistemu ọnọdụ GPS, ọnọdụ nke oge, ọsọ na ọnọdụ ziri ezi.
3.6 Kwado nloghachi akpaaka nke otu bọtịnụ yana nloghachi akpaaka karịrị akarị.
3.7 Kwadoro ịkwọ ụgbọala ihu abụọ, yana ikike ịzọpụta n'oké ifufe.
3.8 Nkwado ntuziaka mgbazi nwere ọgụgụ isi, ịrụ ọrụ karịa.
3.9 Usoro nkwalite: A na - eji propela mee ihe, radius na - erughị 1 mita.
3.10 Jiri batrị lithium, ndụ batrị dị ala karịa 45min.
3.11 Ihe omuma batrị batrị di ala.
3.12 Ngosipụta mgbaàmà mgba ọkụ dị elu nwere ike nweta nhịahụ akara anya n'abalị ma ọ bụ n'ọnọdụ ọjọọ.
3.13 Zere mmerụ nke abụọ: Ndị na - eche nche mgbochi ihu na - egbochi imebi ahụ mmadụ mgbe ọ na - aga n'ihu.
3.14 Ojiji mberede: 1 igodo buut, ngwa ngwa ngwa ngwa, dị njikere iji mgbe ịdaba na mmiri.
Nnyocha na asambodo nke Nnyocha Ngwá Ọrụ Ọkụ Mba na Nnyocha Nnyocha
China Classification Society (CCS) Appdị Nkwado
Nke gara aga: ROV-48 Mmiri Nnapụta Remote Control Robot
Osote: RXR-M80D Ọgụ Na-alụso Robot
QXWB-22 Forest Fire Mobile High Pressure Mmiri ...
JF2000 Obere bolometa
MF14 nkpuchi gas
YSD 130Intrinsically mma Digital Sound Ọkwa ...
Mgbapụta Hydraulic GYJK-25-18